Ndezvipi zvikonzero zvekubhadhara seO professional?
Gore roga roga, injini dzinotsvaga seGoogle, Bing kana Yahoo dzinoshandura sarudzo dzemagadzirirwo emagetsi uye kutsvakurudza maitiro ekushandurwa kwewebsite paSERP. Vakawanda vepanhau webhusaiti havana nguva yakakwana uye ruzivo rwekuona kuenderera mberi kushandiswa kwema digital marketing sphere. Ndicho chikonzero ivo vanoita chisarudzo chakanaka chokubhadhara mutungamiri we SEO anogona kukwanisa kukunda kugadzirisa kambani yebvaneti ravo. Saka nheyo yemhando ipi neipi yehutano yekugadzirisa hutano inobhadhara mazano eSEO akavimbika uye ane ruzivo. Kana iwe uchiri kunetseka kana iwe uchida kukora muongorori weOO consultant kana kwete, zvikonzero zvinotevera zvakajeka zvichakubatsira iwe kuti uite pfungwa yako.
Zvikonzero zvakakosha zvokubhadhara muongorori weEO anoziva
Kutsvaga injini yekugadzirisa inzira inopedza nguva isingagoni kuitwa muchikamu chimwe chete. Kazhinji, zvinotora kubva kumasvondo mana kusvika ku 6 kuti uvandudze rese webhusaiti SEO zvimwe uye mushure mokunge iwe uchakwanisa kutarisa mhinduro dzekutanga. Kuti uwane kukunda kugadzirisa hurongwa, iwe unofanirwa kuve wakabatanidzwa mukugadzirisa uku nekufamba kwenguva. Vatengi vebhizimisi vese havana nguva yakakwana yekuzvipira kune SEO makambani zvachose. Nenzira yakanaka, SEO yakatendeseka yakasimba ine nguva yakakwana uye ruzivo kupa SEO yako yekukurudzira mushandirapamwe iyo inodiwa.
Kana nzvimbo yako yekutonga yakambove yakapfuura gore rimwe chete uye iwe hauna kuiona pane yekutanga kana kuti pane peji yechipiri SERP peji, zvinoreva kuti pane chimwe chinhu chakakanganisika newebsite yako yekugadzirisa. Kuti ibudirire, kutsvaga injini yekugadzirira kunofanira kuitika zvakanaka. Usapotsa mukana wako kuti uwane huwandu hwekutungamira uye utaure kune imwe nyanzvi yeSEO team. Ichakubatsira iwe kugadzirisa zvimwe zvikanganiso zvehutano uye kuvandudza nzvimbo yako SEO. Iva nechokwadi chekuti iwe unoshandisa nyanzvi mune unyanzvi uye ane ruzivo SEO nyanzvi uyo anogona kukupa nemigumisiro yakavhenekerwa uye chikwereti nemapurojekiti akabudirira akaitwa. Kana zvisina kudaro, uri kutengesa kuparadza mari nenguva.
Unofanirwa kuunganidza kambani yeSeO sezvavanoziva kuita kuti site yako ishandise-yakanaka. Vachakupa niche nzvimbo yekugadzira uye zviri nyore kushandisa kushambadzira. Nokuvandudza nzvimbo yako yekushandura uye maonero anooneka, iwe uchakwevera vakawanda vangave vatengi uye unovaita kuti vabhadhara vatengi.
Google inoramba ichishandura mararamiro ayo, saka bhizimisi rako rinodikanwa neboka revanzveri vanobatanidzwa mumarashroom ose emakadheni uye vanonzwisisa kuti vanogona kuyananisa sei kuchinja uku newebsite yako kuitira kuti vasakuvadza mararamiro ayo.
Anopa ruzivo rweSEO achakubatsira kuramba uri mberi kwevakwikwidzi vako. Nevashandi vemazuva ano vane ruzivo rwakawanda rwezvigadzirwa zvepaIndaneti nemashandi, nyanzvi yakanaka ye SEO inogona kuita kuti uve nechokwadi chekuti site yako inonakidza uye inoshandiswa nevashandisi kudarika vatengesi vemisika yako.
Kutsvaga injini yekugadzirisa inoshandiswa-mari inoshanda-shanduro sezvo mari yako yose inobhadharwa mu spades. Ndicho chikonzero, usafunga nezvekubhadhara mutungamiri we SEO semari, funga semari inobatsira kuwana chinangwa sehuwandu hwekugadzirisa hutsika sezvo hunoita kuti iwe uite zvinotungamira uye ini shandisa marimi ako epaIndaneti kuvapo Source .